Itinye Uru na Social Media na njem nleta | Martech Zone
Wednesday, July 29, 2009 Wenezdee, Jenụwarị 11, 2017 Douglas Karr
Mụ na Pat Coyle zutere nnukwu ìgwè na Analọ Ọrụ Indiana nke Njem Nleta taa. A matala otu a dị ka ụlọ ọrụ njem nleta kachasị elu na mba ahụ maka ịme usoro mgbasa ozi mmekọrịta - ọ na-arụkwa ọrụ. Mụ na Pat ga-ekwu okwu na Septemba ruo ihe karịrị iri ise na ise ndị ọbịa si na steeti niile wee zute ndị otu ahụ ka ha hụ etu ha siri were mgbasa ozi mmekọrịta.
Ndi Indiana Office of Tourism social media team bu ndi oru mmekorita nke ndi Jeremy Williams, onye nduzi Amy Vaughan na onye isi oru Emiley Matherly.
N'oge na-adịbeghị anya, ndị otu a na-agba ọsọ My Indiana Summer - asọmpi iji jide isi ihe dị na ịga nleta Indiana jikọtara ya na ozi siri ike na Indiana na ọnụ ahịa mmanụ ọkụ jikọtara iji nye ezinụlọ ezumike ezumike dị egwu na-enweghị itinye nnukwu ego.
Iji banye, ị dị mkpa isonye na Otu Indiana Summer na Flickr! N'ime foto 1600 na ndị otu 200 enyela nnukwu montage foto na Indiana dị ka ebe ndị njem na-aga.
Chee echiche banyere nke ahụ - ihe karịrị ndị òtù 200 na isi ihe 1600 na-ahụ nlegharị anya! Ugbu a chee maka ndị otu 200 na netwọkụ gbatịrị agbatị… ma na Flickr na ndị ọzọ. Nke a bụ asọmpi dị egwu nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Gaa na Indiana kwuru na ha ahụwo mmụba dị ukwuu na ntanetị saịtị n'ihi mkpọsa ahụ.
Naga na Gaa na Indiana Blog wee votu maka foto kachasị amasị gị!
Kedu ka ị si etinye uru na Social Media?
Njem nleta bụ ihe siri ike iji kpata ma gosipụta uru ọ bara. Ngalaba njem nleta na-emefu ego, mana enweghị ego ọ bụla metụtara mmefu ndị ahụ. A na-ahụ ego site na njedebe nke ụlọ ọrụ ile ọbịa, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, wdg. Anyị maara na e nwere ihe nloghachi na ulo oru mbo - ma nsuso na mmefu bụ ihe siri ike mee… ruo ugbu a!
Otu ụzọ m nyere ndị otu ahụ bụ itinye uru, kama, na ndị ọbịa bịara na weebụsaịtị ha. Na ihu ọma, enwere ụlọ ọrụ niile dị ebe ahụ na-egosi uru nke onye ọbịa na ibe weebụ - nke ahụ bụ Payaa Nkeji Pịa!
Otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma dị Semrush. Nwere ike nweta uru nke ndị ọbịa site isiokwu iji Google Adwords Keyword Ngwá Ọrụ, ma keukwu akuko site na Semrush nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe - yana ịnye gị nghọta na asọmpi gị.
Ya mere,… ma ọ bụrụ na m na-ahụ mmụba nke 1,000 ọbịa a ọnwa si Social Media na nkezi ịkwụ ụgwọ-kwa-click uru nke otu n'ime ndị nleta bụ $ 1.00 kwa click, mgbe ahụ anyị maara na uru nke na okporo ụzọ bụ $ 12,000 kwa afọ. Ugbu a uru ahụ nwere ike ịgbanwe-ịghọta ihe ndị were ya iji nweta ahịa ahụ. Enwere nloghachi na itinye ego? O yikarịrị ka - ma ọ dịkarịa ala site na usoro a otu ahụ nwere ike iji anya nke uche hụ ma mmemme ahụ ọ gara nke ọma.
Kudos na Nleta Indiana otu na-agbasi mbọ ike na-agbaso usoro mgbasa ozi mmekọrịta!
Tags: google adwordsIndianakwụọ ụgwọ kwa Pịasemrushelekọta mmadụ medianjemnleta Indiana
Jul 30, 2009 na 2: 37 AM
Mara mma blog. Steeti ndị ọzọ kwesịrị ime nke a. Obodo kwesiri ime ya!
Ahụghị m ụlọ ngosi ihe mgbe ochie Auburn, mana agara m peeji ole na ole azụ.
Ihe dị mma na New Albany dịkwa mkpa ka ha kpuchie.
Barry Wheeler kwuru
Nnukwu ihe. M ka na-tọhapụrụ a ndu n'ezie na-elekọta mmadụ media / ịkparịta ụka n'ingntanet maka njem. Uru nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere maka njem bụ na mmekọrịta e wuru ma tụkwasị ntụkwasị obi obi.